Забур 114 CARS - Nnwom 114 AKCB
1Bere a Israelfo fii Misraim,
na Yakobfifo fii ananafo asase so no,
na Israel bɛyɛɛ nʼaheman.
3Po no hwɛe, na eguanee,
Yordan san nʼakyi;
4Mmepɔw huruhuruwii sɛ adwennini,
nkoko nso huruhuruwii sɛ nguantenmma.
5Dɛn na ɛbae, ɛpo, na wuguanee?
Yordan, adɛn, na wosan wʼakyi?
6Mmepɔw, adɛn, na muhuruhuruw sɛ adwennini,
na mo nkoko, muhuruhuruw sɛ nguantenmma yi?
wɔ Yakob Nyankopɔn anim,
8ɔno na ɔmaa ɔbotan no dan asubura,
na ɔbotan dennen dan nsuwa aniwa no.
AKCB : Nnwom 114